5 Oge egosipụtara iji zipu ozi ịntanetị akpaaka gị | Martech Zone
Anyị bụ ndị nnukwu Fans nke ozi ịntanetị akpaaka. Ndị ụlọ ọrụ anaghị enwekarị ego iji metụ atụmanya ọ bụla ma ọ bụ ndị ahịa aka oge niile, yabụ ozi ịntanetị akpaaka nwere ike inwe mmetụta dị egwu na ike gị ikwukọrịta okwu ma zụlite ma ndị ndu gị na ndị ahịa gị. Emma rụrụ ọrụ dị egwu n'ịchịkọta ozi infographic a n'elu Ozi ịntanetị akpaaka akpaaka kacha dị irè izipu.
Ọ bụrụ n’ị nọ n’egwuregwu ịzụ ahịa, ị maraworị na akpaaka bụ isi ihe na-eme ka ị nweta ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị n’oge kwesịrị ekwesị. Mana ị maara nke ozi ịntanetị na-akpaghị aka ga-eme ka ị nwee nnukwu nsogbu maka ịzụ ahịa ahịa gị?
Mgbe na ihe kpatara izipu ozi ịntanetị akpaghị aka
Nnabata ozi ịntanetị dị 86% dị irè karịa akwụkwọ akụkọ email ọkọlọtọ.
Azụlite ozi ịntanetị mee ka 47% buru ibu zuo ihe kariri ndu ndi na-azughi oke.
E-mail Daalụ mepụta ego 13 ugboro karịa karịa ozi nkwado.
Ozi ịntanetị ụbọchị ọmụmụ bulite ọnụego ntụgharị site na 60% karịa akwụkwọ ozi ọzọ na otu onyinye.
Ozi ịntanetị ọzọ gbaa ndị ọzọ aka, 45% nke ndị natara na-agụ ozi ndị sochirinụ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị kwenyere na nkwukọrịta ozi email nwere ike imetụta mbọ ị na-agba n'ịzụ ahịa, ozi akpaghị aka dị ka nke a anaghị adịkarị. Nke a nwere ike ibelata ohere ị nwere ịbanye na nsogbu ịnapụta. Ma ebe obu na emeziri ha ihe n’oge na n’oge, ha puru ime ka oru ha di ike. Nke ahụ pụtara na imeghe, mma pịa-site na ọnụego na ntụgharị.
Tags: ozi ịntanetị akpaghị akaakpaakaụbọchị ọmụmụ ozi ịntanetịntụgharị ntụgharịakpaaka emailọnụego mgbanwe emailemail emeghe ọnụegomyemmaazụlite ozi ịntanetịemeghe ọnụegoemeghe ọnụegoozi ịntanetị ọzọdaalụ ozi ịntanetịịnabata ozi ịntanetị
Nov 26, 2015 na 5:47 AM
Daalụ maka ndụmọdụ! M ga-eburu nke ahụ n’uche oge ọzọ m na-eji GetResponse.